Kroazada fahavalo - Wikipedia
Tombokasen' i Md Louis
Ny kroazada fahavalo dia kroazada notarihin' i Louis IX (na Saint Louis) mpanjakan' i Frantsa tamin' ny taona 1270 taorian' ny fandrahonana nataon' ilay soltana mamelòka atao hoe Baybars tamin' ireo Fanjakana latina any Atsinanana.
Antsipiriany[hanova | hanova ny fango]
Nanomana ny kroazada farany i Louis IX tamin’ ny taona 1270. Nanentana ireo olona ao amin’ ny saranga ambony izy nefa tsy narisika izy ireo. Ny fanafihana an’ i Tonizia dia natao mba hampiovana finoana ny emiran’ i Tunis. Nijanona tampoka izany tamin’ ny nahafatesan’ i Saint Louis teo ambany mandan’ i Tunis tamin’ ny 25 Aogositra 1270.
Nandritra ny fotoana fohy taorian’ izany dia niharan’ ny fanerena tsy nitsaha-mitombo tamin’ ny tafika ejipsiana i Siria sy i Palestina. Nifanarakaraka ny faharesen’ ny tanàna ao amin’ ireo fanjakàna naorin’ ny tafiky ny kroazada noho ny nafitsoky ny tafiky ny Mamelòka. Ny tanàna mimandan’ i Saint-Jean d’Acre dia azon’ ny Miozolmana tamin’ ny 18 Mey 1291 ary ireo mpijirika mpisikina vokovoko toy ny moanina Mpiaro Tempoly (frantsay: Templiers) sy ny moanina Mpampiantrano (frantsay: Hospitaliers) izay nitsoa-ponenana tany Kiprosy (Sipra). Tamin’ny taona 1306 ireo moana Mpampiantrano ireo dia niorim-ponenana tao amin’ ny nosy Rhodes ao amin’ ny Ranomasina Mediteranea, ka nitoetra tao hatramin’ izay ka hatramin’ ny taona 1522 izay nampitolo-batana azy ireo tamin’ ny Torka. Tamin’ ny taona 1570 dia azon’ ny Torka koa i Kiprosy izay teo ambany fiandrianan’ i Venitia (frantsay: Venise). Ny fanjakana latina hafa tao Grisia (Gresy), izay niorina tamin’ ny kroazada fahefatra, dia afaka nanohy ny fisiany hatramin’ ny tenatenan’ ny taonjato faha-15 naharavany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kroazada_fahavalo&oldid=1002067"
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 09:27 ity pejy ity.